I-La orchard, ukuzola kunye nolonwabo - iCasa Andi - I-Airbnb
I-La orchard, ukuzola kunye nolonwabo - iCasa Andi
Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș, Romania
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguVictor
Le ndlu ikummandla wasemntla we-Arges County, obonisa iinduli ezitofotofo nezityalo ezininzi. Iindawo ezikufutshane/indawo ithule kakhulu, ekupheleni kwesitrato esinezindlu ezintle nabantu abakhethekileyo. Ezi zindlu zibekwe kumhlaba obiyelweyo oneeskwe mitha eziyi-3500 ezinemithi yeziqhamo emincinci eyi-200, ityeya yengca kunye neendawo ezininzi zokudlala zabantwana.
Sithanda izilwanyana kwaye siyazamkela izilwanyana ngokukhethekileyo kwibala lendlu .
Indlu ka-Andi yiyo engasekunene , eyona inamagumbi aliqela .
Izindlu ezisemaphandleni zikumhlaba obiyelweyo oziiskwe mitha eziyi-3500 kunye negadi yeziqhamo eyi-200 yeziqhamo (iintlobo eziyi-7 zeapile, iintlobo zeenwele eziyi-4 kunye neepleyiti eziyi-3) ingca kunye neendawo ezininzi zokudlala zabantwana (itrampoline, ibala lokudlala, isango lebhola ekhatywayo, isitulo esirhubuluzayo).
Indlu esemaphandleni eyakhiwe ngohlobo lweemitha eziyi-27 kwaye inekhitshi , igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala elingaphezulu kwegumbi lokuhlambela. Indlu esemaphandleni iyi-54 square metre kwaye iquka igumbi labazali elinebhedi yokulala, igumbi labantwana elineebhedi ezikhweleneyo, igumbi lokuhlala elivulekileyo elinekhitshi, igumbi lokuhlambela nendawo encinci.
Izindlu nganye zixhotyiswe nge-cable TV kunye neintanethi esuka kwi-Digi, i-TV, ifriji, i-boiler, i-induction hob, umatshini wokwenza ikofu kunye nezinye izinto eziluncedo. Ithala lixhotyiswe ngefenitshala yokoja kunye nefenitshala ye-terrace.
Ezi zindlu zimbini zamaplanga zintsha , azisetyenziswanga, zigqityiwe, zigqityiwe ngo-2020 kwaye zenzelwe abakhenkethi (aziqeshwanga kude kube ngoku ).
Le ndlu ikumthombo ongaphantsi komntla we-Arges County, ophawulwe ziinduli ezinobubele nezityalo ezininzi. Izindlu ezisemaphandleni zikuMlambo iArges, eValea Danului, engekho kude neCurtea de Arges. Le ndawo iyonwabela ukuba kwindawo entle ekufutshane nedlelo elisetyenziswa ngumntu wonke, nto leyo eyenza kubekho intlanganiso neegusha neenkomo. Iindawo ezikufutshane/indawo ithule kakhulu, ekupheleni kwesitrato esinezindlu ezintle nabantu abakhethekileyo.
Ipropati iya kusetyenziswa kuphela ngabakhenkethi. Sikumgama weekhilomitha ezi-3 kuphela, eCurtea de Arges kwaye siyafumaneka kulo naluphi na ulwazi okanye iimeko.
Sinokunxibelelana ngesiRomania, isiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane.
Singakukhokela ukuba ufumane iindlela ezinomdla zokuchitha ukuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Municipiul Curtea de Argeș